UZandie ukhulekela uKelly wakwabo angasabhekani naye
IZIPHALAPHALA zabaculi bandawonye uZandie noKelly Khumalo abangabanye babaculi abathandwayo kuleli Isithombe: INTAGRAM
UMCULI wakuleli uZandie Khumalo-Gumede usephumele obala waveza ukuthi ukhulekela udadewabo uKelly Khumalo lapho ekhona. UZandie osekunesikhathi kwavela izindaba zokuxabana kwakhe nodadewabo usephumele obala wabhala kahle ngaye ezinkundleni zokuxhumana.
Ekhasini lakhe kwi-Instagram uZandie uveze ukuthi umbeka emkhulekweni uKelly maqede wanameka isithombe sabo nokubonakalayo kuso ukuthi sathathwa kukuhle.
UZandie noma engazange anabe ngazwi kodwa ukuvezile ukuthi lesi simo abasabhekene naso uyafisa sidlule ngelinye ilanga.
"Thixo lapho ekhona uqhubeke umuphe amandla. Uze usigcinele nomama ekhaya, uhlala ehlezi ekholwa ukuthi ngelinye ilanga isimo sizoshintsha," kubeka uZandie. Yize abantu engabavulelanga ukuthi baphawule kulo mbhalo kodwa abaningi bawuthandile umkhuleko wakhe njengoba abakhombise ukuwuthanda bengaphezulu kuka-18 000.
UKelly akazange thi vu ngalo mbhalo kunalokho ubhale ekhasini lakhe ku-Instagram ebonga izibusiso ezilokhu zimehlele njalo. "Baba ngiyabonga ngezimangaliso ozenza empilweni yami futhi ngiyazi kusekuningi osazokwenza. Ngiswele imilomo eyizinkulungwane," kusho uKelly.
UZandie noKelly ngabanye babaculi besifazane abangene endimeni yomculo bazimela kwazwakala. Yize uKelly ethole udumo kuqala kodwa ubengakhohlwa ukukhuluma ngodadewabo kwabezindaba. NoZandie ngokunjalo ubehlala eqhakambisa ikhono likadadewabo nokwamangaza abaningi uma kuvela izindaba zokungezwani kwabo.